ShippingEasy: ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းစျေးနှုန်း၊ ခြေရာခံခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်အီးကောမတ်စ်အတွက်အထူးလျှော့စျေးများ | Martech Zone
အီလက်ထရွန်နစ်ရောင်းဝယ်မှုနှင့်အတူရှုပ်ထွေးမှုများစွာရှိသည် - ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများ၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ပြည့်စုံခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းများအထိ - ကုမ္ပဏီအများစုသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်ချထားသည့်အခါလျှော့တွက်ကြသည်။ သဘောင်္တင်ခြင်းသည်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူမှု၏အရေးကြီးဆုံးကဏ္ aspects တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုန်ကျငွေ၊ ခန့်မှန်းတွက်ချက်သည့်ရက်နှင့်ခြေရာခံခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
စွန့်ပစ်ခံရသည့်စျေးဝယ်ခြင်း၏တ ၀ က်ကျော်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အခွန်နှင့်အခကြေးငွေတို့အတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များရှိသည်။ စွန့်ပစ်ထားသောစျေးဝယ်ခြင်းလှည်းများ၏ ၁၈% အတွက်ဖြည်းဖြည်းဖြန့်ဖြူးပေးရသည်။
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမကပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းကိုလည်းတိုးမြှင့်ပေးသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းစနစ်သည်သင်တည်ရှိသည်ကိုပင်မသိသေးသောရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှုန်းထားများကိုရယူနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်သင့်ကိုငွေများစွာသက်သာစေသည်။ ShippingEasy သည်ထိုစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သဘောင်္ UPS, FedEx, DHL အီးကောမတ်စ်၊ DHL Express, Endicia၊ USPS လျှော့စျေးနှုန်းဇယား၊ USPS CPP vs CBP နှင့် USPS တို့အပါအဝင်လူကြိုက်များသော e-commerce ပလက်ဖောင်းအားလုံးနှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများစွာနှင့်အလုပ်လုပ်သောအွန်လိုင်းရေကြောင်းဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဒေသဆိုင်ရာနှုန်း Box ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောပို့ကုန်နှုန်းကိုသော့ဖွင့်ပါ - စီးပွားဖြစ် Plus စျေးနှုန်းကိုသုံးပါ၊ အရွယ်အစားမခွဲခြားဘဲအာမခံထားနိုင်သည့်အနည်းဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှုန်းထားများ။ ထို့အပြင်သီးသန့်နှုန်းထားနှင့်အာမခံအထူးလျှော့စျေးကိုရယူပါ။
Labels မြန်ဆန်စွာပုံနှိပ်ပါ - တံဆိပ်များကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ အမိန့်များကိုစီမံခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သဘောင်္တင်ခြင်းနှင့်လက်ခံသူများကိုအသိပေးခြင်း - အားလုံးသုံးရလွယ်ကူသော cloud-based သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခု။
ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပြန်လာခြင်း - e-commerce ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံ၏ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရရှိခြင်းတို့သည်အဓိကကျသည်။ ShippingEasy သည်သူတို့ကိုသင်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအပေါ်လွယ်ကူစေသည်။
လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက် - စွမ်းအားကောင်းသောအလိုအလျောက်သည်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်းများကိုပြုလုပ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့သင်၏အရေးကြီးသောအရာများကိုအာရုံစိုက်နိုင်သည်။
အဆင့်မြင့်အစီရင်ခံခြင်း - သင်၏ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ဖောက်သည်များနှင့်ခြေရာခံရာနေရာများတွင်သင်ရှိနေရန်လိုအပ်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုရယူပါ။
အွန်လိုင်းရောင်းသူများသည်အီးမေးလ်များအပါအ ၀ င်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားဆက်သွယ်မှုများကိုအလိုအလျောက်ပို့ရန်အမိန့်နှင့်ပို့ခြင်းအချက်အလက်များကိုသုံးနိုင်သည်။
စွန့်ပစ်စျေးဝယ်လှည်း - ပစ္စည်းများကိုမိမိတို့၏လှည်းတွင်ထားခဲ့သည့်လူသိများသောဖောက်သည်များကိုပြန်ပို့ပါ။
ထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်ရန် - အစီအစဉ်အတွင်းရှိပစ္စည်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ပြန်ချိတ်ပါ
Upsell ဆက်စပ်ထုတ်ကုန် - အမိန့်ရှိပစ္စည်းများပေါ်တွင်အခြေခံသည်
အပေးအယူနှင့်ကူပွန်ကိုကမ်းလှမ်း - စုစုပေါင်းအမှာစာတန်ဖိုးသို့မဟုတ် ၀ ယ်ထားသောပစ္စည်းအပေါ်အခြေခံသည်
ဖောက်သည်များကိုပြန်ဆပ်ပါ - မလှုပ်မရှားအခြေအနေပေါ်အခြေခံသည်
ထို့အပြင်၎င်းကို setup ပြုလုပ်ရန်အတွက် plug-and-play တင်းပလိတ်များရှိသည့်စာကြည့်တိုက်တစ်ခုရှိပါသည်။ သူတို့ရဲ့အထောက်အကူပြုဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့သည်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွေ့အကြုံနည်းသောရောင်းသူများအတွက်လည်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ရန်နှင့်တင်းပလိတ်များကိုဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။
သဘောင်္ 3dCart၊ Amazon Prime Shipping၊ Amazon ရောင်းချသူဗဟို၊ BigCommerce၊ ChannelAdvisor, eBay, Etsy, Magento, Prestashop နှင့်ပေါင်းစည်းထားသည် အမြန်စာအုပ်များ, Shopify၊ storenvy၊ လှိုင်, WooCommerceYahoo! စတိုးဆိုင်များနှင့်ပိုပြီး။ ၎င်းတို့တွင်စီးပွားဖြစ် e-commerce ပလက်ဖောင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်ရန်အတွက် API စာကြည့်တိုက်တစ်ခုအပြည့်ရှိသည်။
သင်၏ပို့ကုန်ကိုလွယ်ကူစေရန်နှင့် ShippingEasy ဖြင့်သိမ်းဆည်းပါ။ သင်၏ရက် ၃၀ အခမဲ့စမ်းသပ်မှုယခုစတင်ပါ။
ထုတ်ဖော်: ငါတို့အဘို့အမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြသည် သဘောင်္.
Tags: 3dcartစွန့်ပစ်စျေးဝယ်လှည်းအမေဇုံချုပ်သင်္ဘောအမေဇုံရောင်းသူဗဟိုBigCommerceချန်ပီယံလိဂ်DHL အီးကောမတ်စ်DHL Express ကိုeBayအင်ဒီစီယာEtsyFedExIntegratedmagentoစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်PrestaShopအမြန်စာအုပ်များShipping API များ။ရေကြောင်းအလိုအလျောက်ရေကြောင်းတံဆိပ်များရေကြောင်းပြန်ပို့ရေကြောင်းခြေရာခံခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာပို့ဆောင်ရေတံခွန်shopifyစည်သူလွင်ရေကြောင်းခရီးစဉ်upsUSPS CBPUSPS CPPUSPS CPP နှင့် CBPUSPS လျှော့နှုန်းဇယားUSPS ဒေသဆိုင်ရာနှုန်း BoxကဗျာwoocommerceYahoo! စတိုးဆိုင်များ